Foyii Loli Qeerroo! – Damee Boruutiin | Kichuu
Posted on January 15, 2018 by fmegersa
Sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itopiyaa keessa jiran akkuma Uummata Oromoo akka ijaarsa Qeerroo mataa isaanii qabaatan gargaaraa. Mootummaa TPLF kana jalatti Saba fi Sabi-lammiin hin saamiin, hin hidhamiin fi hin ajjeessamiin jiru. Hunduu TPLF irratti aarii qaba, Uummata Somalee fi Tigrayi dabaletee. Bakka deemtee hundatti akka salphatuu fi fudhatamaa dhabdu gochuudhaan qofaa hambisuu ni barbaachisa. Biyya alaa keessatti qulaa dhaabbachaa jirti. Warri ala jiruus akkuma kana jabeessanii ishee saaxiluu dha.